खेल : टाइगर वुड्स र सरिना विलियम्स दर्शकका लागि सङ्घर्ष गर्दै
ढाड दुखेकोले सरिना विलियम्सले ओहायोमा हुने गल्फके भव्य प्रतियोगिता नखेल्ने निर्णय गरेको मेदिनाह कन्ट्री क्लबमा बुधबार साथीहरूसँग हिँडिरहेका टाइगर वुड्सले खबर पाए।
तीन दिनको अवधिमा प्रतियोगिताबाट सरिनाले बाहिरिने निर्णय गरेको यो दोश्रो पटक हो। यस्तै समस्याका कारण टोरोन्टोको रोजर्स कप फाइनलको पहिलो सेटबाट पनि उनी बाहिरिएकी थिइन्।
वुड्सले यो राम्री बुझ्न सक्छन्। गत साता लिबर्टी नेसनल गल्फ क्लबमा भएको फेडएक्स कप प्लेअफ ओपनरको दोश्रो चरण उनले नखेल्ने निर्णय गरे। उनलाई पनि ढाडको समस्या भएको थियो। पाँच दिनपछि निकै आराम भएको बताए पनि सावधानीका लागि उनले फुल शट हानेका छैनन्।
बिहीबारदेखि बिएमडब्ल्यु च्याम्पियनसिप सुरू हुँदैछ। वुड्स ४३ र विलियम्स ३७ वर्षका भए। दुवै साउदर्न क्यालिफोर्नियाका हुन्। दुवैको शल्यक्रिया भएको छ। साउथ फ्लोरिडामा २५ माइल जति टाढा बस्ने भए पनि उनीहरू एकदमै घनिष्ठ छन्।
दुई दशकसम्म दुवै जना आ आफ्नो खेलका पर्याय बने। तर अब उमेर, चोटपटक र युवा प्रतिस्पर्धीसँग निकै सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ। त्यसमाथि आमाबाबुको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुछ।
“त्यसैले हामी यति निकट भएका हौं,” वुड्सले भने।
अहिले उनीहरूको यात्रा ओरालो लागिरहेको छ। सन् २०१७ मा अष्ट्रेलियन ओपनमा जीवनको २३औं ग्रान्ड स्ल्याम जित्दान विलियम्स गर्भवती थिइन्। अहिले उनको छोरी छ, ओलम्पिया ।
पोहोर बच्चा जन्माउने क्रममा विलियम्सलाई कठिनाइ भयो। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पनि भयो तर उनी खेलमा फर्किइन्। फर्किएपछि चौथो प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा पनि पुगिन्। त्यसपछि युनाइटेड स्टेट्स ओपनको दोश्रो फाइनल खेल पुगिन्। दुवै खेल हारिन् तर वुड्सको चिरस्थायी प्रशंसा बटुलिन्।
वुड्सले भने, “उनले गरेको काम अविश्वसनीय छ। उनले जसरी खेलमा फर्किएर खेल्नसक्नु उनी कति उत्कृष्ट छिन्, कति प्रतिभाशाली छिन् भन्ने देखाउँछ।”
“स्पाइल फ्युजन” शल्यक्रिया गरेपछि “कमब्याक”का लागि विलियम्सले प्रेरित गरेको वुड्सले बताए। तीनवटा कम जटिल शल्यक्रियापछि त्यहि नै अन्तिम विकल्प भएको उनले बताएका थिए। अघिल्लो वर्ष उनको आफ्नै खेल यात्रा पनि असम्भवजस्तै थियो। सन् २०१८ को पिजिए च्याम्पियनशिप उनले दोश्रो स्थान पाए। त्यसको एक महिनामा उनले टुर च्याम्पियनशिप जिते। सन् २०१३ यता उनले जितेको यो पहिलो “टाइटल” हो।
गत अप्रिलमा वुड्सले ११ वर्षयताकै ठूलो खेल जिते। समग्रमा यो उनको १५औं थियो। पछि विलियम्सले ट्विट गर्दै वुड्स खेलेको हेर्दा गहभरि आशु आएको बताइन्। वुड्सजस्तो महान खेलाडी अरू कोही नभएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, “म एकदमै उत्प्रेरित छु। धन्यवाद, साथी।”
वुड्स र विलियम्स प्रायः एसएमएस गरिरहन्छन्। उनीहरूको मित्रता झन् गहिरो बन्दै गएको वुड्सले बताए। खेलबाहेक दुवैको अन्य रूचि पनि छ। न वुड्स न विलियम्स, कसैलाई पनि थप टाइटलको सायदै आवश्यकता होला। वुड्सको आफ्नै फाउण्डेशन छ जसले देशभरिका “लर्निङ सेन्टर”लाई सहयोग गर्दछ। “कोर्ष डिजाइन” गर्ने उनको आफ्नै “साइड बिजनेस” पनि छ। विलियम्सको आफ्नै फेसन लाइन छ।
उनीहरू विश्वकै धनी खेलाडीमध्ये पर्छन्। न्यूजर्जीमा वुड्स र विलियम्स क्यानडामा पीडा र असफलतासँग जुझिरहेका थिए। तर केहि दिनमै उनीहरू खेलमा फर्किए। मानौं उनीहरूको खर्च त्यसैमा निर्भर छ।
“उनीहरू मानिसलाई निराश बनाउन चाहँदैनन् । त्यसैले त्यसो गर्छन्जस्तो लाग्छ,” चारपटक प्रमुख टाइटल जितेका रोरी म्याकलरोयले बताए। उनी वुड्सलाई नजिकबाट चिन्छन्। विलियम्सकी साथी क्यारोलाइन वोज्नियाकीसँग उनको “इन्गेज्मेन्ट” भएको छ। त्यसैले विलियम्सलाई पनि नजिकबाट विचारेका छन्।
उनले भने, “जे दिइन्छ, त्यही पाइन्छ। मेरो विचारमा टाइगर र सरिनाले यतिका वर्षहरूमा उत्कृष्ट खेल खेलेर मानिसहरूलाई धेरै आनन्द दिएका छन्। उनीहरू त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् तर सजिलो छैन। समय बदलिन्छ।”
उनीहरूको उत्कर्षमा वुड्स र विलियम्स अभूतपूर्व थिए। मानौं गल्फ र टेनिस कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने देखाउनकै लागि उनीहरू धर्तीमा आएका हुन्। उनीहरू प्रायस् जितिरहन्थे। त्यसैले उनीहरूको उत्कृष्टता सबैलाई सहज लाग्थ्यो।
अब छैन। मेदिनाको “ब्याक नाइन”मा वुड्सलाई हिँडिरहेको देख्नु फ्यानहरूका लागि ठूलो कुरा थिएन। वुड्स त्यहाँ दुईओटा प्रमुख च्याम्पियनशिप जितेका छन्।
“मानिसहरू जोखिम बुझ्नसक्छन्,” म्याकलरोयले भने, “सरिना र टाइगरले २० वर्षसम्म कुनै जोखिम वा कमजोरी देखाएनन्। अहिले मानिसहरूले उनीहरूको त्यो पाटो देखिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई ह्युमनाइज गर्छ र झन् आकर्षक बनाउँछ।”
Published Date: Saturday, 17th August 06:40:44 AM
कोरोना भाइरसबाट बच्न कसरी बढाउने…
अध्ययन भन्छ- गर्भनिरोधक चक्कीका प्रयोगकर्ताको…
विश्वकै पहिलो उड्ने ट्याक्सी
कोरोना भाइरस सेलफोन ट्रयाकिङबारे पत्रकारले के थाहा पाउनुपर्छ ?
कोरोनाका बिरामीलाई बचाउन सस्तो भेन्टिलेटर बनाउँदै भारत
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिको रगतले जोगाउन सक्छ जीवन
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित थाहा पाउनुपर्ने केही शब्दका अर्थ
मर्निन्ङ रिड :
कोरोनाभाइरस के हो ? मृत्यु दर कति छ र कसरी बच्ने ?
कोरोनाको पहिलो पीडित विश्व नेतृत्व
यी हुन् कोरोना भाइरसबाट संक्रमित सेलिब्रिटी
उपभोक्ताका तीन मनोविज्ञान: जसले बजारमा सामान किन्न हानाथाप भइरहेछ
कोरोना भाइरसको आश्चर्यजनक तथ्य: बालबालिकामा कम प्रभाव, वृद्धहरूको मृत्युदर उच्च
यसरी घटाउन सकिन्छ ट्राफिक जाम
कोरोना भाइरसबाट बच्न कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ?
छुट्टी लिनु मुटुको स्वास्थ्यका लागि राम्रो : अध्ययन